ASAN-JIOLAHY TOAMASINA : Tratra ny mpamily kamiao nitondra entana halatra milanja 8 taonina
Ny alin’ny sabotsy 15 jona 2019 lasa iny dia nahazo loharanom-baovao ny Polisy tao amin’ny kaomisarian’ny Polisy Boriborintany voalohany Tanambao Toamasina fa nisy andian’olona nikasa hamaky ny magazay fitahirizana jirofo eny amin’ny faritra RN5 iny. 18 juin 2019
Rehefa nahare an’izany ny Polisy dia nidina tany an-toerana avy hatrany ka namantatra sy nisambotra an’ireo jiolahy ireo. Tamin’io fotoana io dia tratra ny kamiaobe nitondra ny entana halatra milanja eo amin’ny 08 taonina eo mahatratra 160 lasaka niaraka tamin’ny mpamily.
Nentina tany amin’ny kaomisaria avy hatrany ilay kamiao misy ny entana niaraka tamin’ny mpamily mba hatao fanadihadiana. Tamin’io fotoana io dia ny mpamily irery ihany no tao anatin’ilay kamiao nitondra ny entana. Nahavitan’izy ireo taratasy hosoka anefa ity entana ity mba hahafahana mitondra izany eny an-dalana. Nilaza ny mpamily fa nisy nanakarama izy hitondra ireo entana ireo ka dimy alina sy iray hetsy no karamany amin’izany. Mitohy ny fanadihadiana hamatarana ireo niara-niasa tamin’ity mpamily ity hatramin’ izao.
Jiolahy mpandroba izy roalahy maty voatifitra fa tsy tanora mpianatra AMBALAKISOA TOAMASINA (215) 20 janvier 2020 Nahatratra hosoka miisa 89 tamin’ny fidirana ho miaramila ETAMAZAORO JENERALIN’NY TAFIKA (197) 20 janvier 2020 Naato tamin’ny asany ny Lehiben’ny Pompiers FIHOTSAHAN’NY TANY TENY AVARADOHA (134) 21 janvier 2020 Miatrika famotorana lalina ny tale jeneraly teo aloha ORINASA KRAOMITA MALAGASY (128) 22 janvier 2020 Nahitana fatim-behivavy tsy nisy loha novonoina tao Analaradjy SAINTE-MARIE (116) 20 janvier 2020 Tovolahy iray namoy ny ainy, novonoina tamin’ny fomba feno habibiana MANANARA AVARATRA (98) 22 janvier 2020